Uthando lweZodiac Ukuhambelana: I-Virgo Man kunye nePisces Women
Ingaba ngumdlalo owenziwe kwienkwenkwezi?
I- Virgo indoda kunye ne-Pisces ibhinqa iphikisana ngeendlela ezininzi kodwa iyazinikezela ngokufanayo. Kuya kuthatha umonde omkhulu ukukhulisa uthando lwabo. Ngethamsanqa, i-Virgo nePisces inalo kubo ukugcina ukholo, ngakumbi xa kuzinikele ukuhlala kunye.
Ngethemba lokuba uyazinikela
Ngokukhawuleza, intombikazi yethu ibona umntu obeka ingqalelo. Intsholongwane yakhe igugu ukuvula umnyango kuye kwaye uyifake ephosa xa ibanda.
Ubonisa ukunyamekela kwakhe induduzo. Ukhumbula ukuba uthatha ubisi lwe-alimondi kwikofi yakhe, kwaye ulungile ngexesha, ebonisa inhlonipho engapheliyo.
Ukunyamekela kwakhe kuyidrafti enkulu, njengokuba uvakalelo lwakhe ekuhambeni kwezinto. Bobabini iVirgo kunye nePisces zibukhali kwaye zifuna ixesha lokugaya amava abo. Bobabini babhalisa kwiqondo elingaphantsi, kwaye yindlela efanelekileyo yokuqalisa ngothando.
Indoda yaseVirgo ikhulula kakhulu kwaye i-super mercurial, ilawulwa yiMercury (kunye neChiron). Iivili zengqondo yakhe zihlala zijika kwaye zihlala zijolise kwiingxaki zemihla ngemihla. Unokuba ngunyameko wokumkani, uhlala ekhupha kwaye ephazamise into ethile.
I-Pisces gal ine-atmospheric emotionally temperament. Ungumfazi weemvakalelo ezininzi, ezinye zazo ziyimfihlelo kakhulu njengoko zibamba, kwaye zingabonakali zihambelana noko kwenzeke apha nakwangoku.
Ulungelelaniswa kwizinto eziqhawulayo kwaye kaninzi akafumani ngokukodwa ukuma, ukulahlekelwa ngundoqo.
Olu hlobo lento lungathumela indoda yaseVirgo ibe yintlungu yokuphoxeka kunye nokukhomba ngomunwe.
Indlela yakhe ye-lackadaisical kunye nesiza sakhe ukuqhuba iinqanawa ezinqamlekileyo zibonakala zingekho. Yaye le nto ingcambu yeepateni zokumangalela ezinokuthi ziphuhlise, apho iiPisces zidlala ngokungakhathali, kunye neenkwenkwezi ze-Virgo njengobunzima bokulawula umonde.
Kodwa ukuba bangawa kulo mgibe, okanye ubuncinane bawubona umzekelo, banokugwema ukudlala ngokugqithisileyo. Yaye ukuba nganye ibonisa inhlonipho ngenye, le nto ingaba ilungiselelo eliyanelisayo.
Umntu waseVrogo ukulumkisa kwiidemon zobomi kwenza ukuba i-Pisces ibhinqa ikhuselekile. Unako ukuphumla kuye, kwaye makamnakekele ishishini. Unokuziva ufunekile, awamthandayo, kwaye ukhululekile ukulandela indlela yakhe, kwiindawo ezicacileyo, ezicingayo.
Umhlaba kunye neZulwini
Indoda yaseVrogo isentloko yakhe, kodwa njengomqondiso wehlabathi , uyakwazi ukuxhamla kwizinto ezonwabileyo. Yaye uvakalelwa kwintlungu yakhe yokubonisa inceba onokuthenjwa ngentliziyo yonke.
Emva kwexesha, ukhulula umzimba wakhe, ingqondo kunye nomoya, kwaye ujoyine kwimimandla yothando lomthandane. Ewe, ufuna iimfuneko ukuba zilungele, zonke iintlanga ziyancipha kwaye ngokuqinisekileyo kungekhona ngexesha leentsuku zokusebenza, ngoko musa ukuzimela emva kwemini emnandi.
Ibhinqa le-Pisces lingamfumana indoda yaseVirgo ibe yinkampani, kwaye ixhalabele ngobuchule bayo. Oko ufuna ngokwenene kukuzilahleka kunye naye, kwaye ukubeka umoya kungakunceda.
Iipisisi zibonakaliso lwamanzi ezilawulwa yiNeptune , umgcini we-ocean deep. Unqwenela ulwalamano lomphefumlo kwaye uxhaphaze ukuba umntu waseVirgo uhlala ephakamileyo.
Iingqondo zindlela yokuza kunye. Uninzi oluthile oludlayo olulisa umdlalo luba yinto yokutya.
Nciphisa kusihlwa kunye ne-massage kunye nama-aromas yenyama kunye nemifanekiso. Imimiselo yemicimbi yothando kubo bobabini, abathanda i-boudoir ukuba bazive bebodwa, bacelise baze babe ngcwele ngandlela-thile. Xa uhamba ngokukhawuleza, izithethe zengqondo ziba ibhuloho ukusuka kwingcinezelo yansuku zonke ukuya kuloo ndawo uya kuyo, ukuvuselela uthando lwakho.
I-Aquarius nePisces Uthando oluhambelanayo
Umfazi weCancer kunye ne-Aquarius Man - Uthando lomdlalo
IVenus Libra Man
I-Aries kunye neSagittarius Uthando oluhambelanayo
Yibani Ngokwenene I-Libra Indoda Ethanda Ngothando
U-Aries Man kunye noLood Woman - Uthando lomdlalo
I-Venus Ilungelelaniso lweLona kunye nezinye iiVasus Signs
I-Capricorn kunye neCapricorn Love Compatibility
Iingcebiso zokuthanda i-Aquarius
I-Capricorn no-Aquarius Love Ukuhambelana
Venus ku Leo - Venus yakho Leo
Yiyiphi intlukwano phakathi kweAtom kunye neIon?
Yintoni i-Diameter Breast Height?
IiRekodi zeeVital kwi-Intanethi
Iinqununu ezilishumi eziphezulu zeSUV
Amaknetarta: I-Neutron Stars kunye neKick
Indlela yokusebenzisa ixabiso lokuThengisa iCar Used
Imifanekiso yeCollect Ford Pickup Trucks
UKHUBA I-ERA: I-Campaign yePhyllis Schlafly yokuLingana kwabasetyhini
Imifanekiso kaAdolph Hitler
Iindlela ezili-9 zokulwa neNkcubeko yeRape
Amagama ezi-11 iintlobo ezahlukeneyo zeeHolo kwiindawo
Iinqununu ezi-5 zeHarlem Renaissance
I-Track and Field Fields:
Iqonga leBhola leNgcaciso Iingcebiso kunye neSicwangciso
Imfazwe Yehlabathi II: iMfazwe yeKwajalein
Ngubani ohlabelelayo iingoma 'kwiLizwe eliqinileyo' kwi-Movie Soundtrack?
Iiphambili ezili-10 zeeMpawu zeeFayili zeAliyeli